[झटारो] देउवा निर्दोष सभापति - व्यंग्य - प्रकाशितः वैशाख २३, २०७५ - नेपाल
निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकमा संस्थापनइतर सदस्यहरूको एक मात्र उद्देश्य सभापतिलाई हारको जिम्मा लगाउनु थियो । सभापतिलाई हारको जिम्मा भिराएर ढुक्कको सास फेर्न आतुर केन्द्रीय सदस्यहरू महिना दिनसम्म चिच्याउँदा–चिच्याउँदा कति जना मूच्र्छासमेत परे । तर, सभापति टसमस भएनन् । एक अविचलित योद्धाझैँ उनले हार स्वीकार गर्दै गरेनन् ।
सभापतिले पार्टी हारेको होइन, उम्मेदवार हारेका हुन् भन्ने अकाट्य निष्कर्ष चुनावलगत्तै निकालिसकेका थिए । सभापतिको निष्कर्षलाई बेलैमा आत्मसात् गरेको भए विचरा ती साथीहरूले यत्रा दिनसम्म असिनपसिन भएर आफ्नै शीर्षनेतासँग पौठेजोरी खेल्नैपर्ने थिएन । आफ्नै सभापतिलाई गलाउन खोज्दा अन्तत: उनीहरू नै लखतरान भए । वास्तवमा सभापति एक्लैले हारको जिम्मेवारी लिँदा पार्टीमा एकल नेतृत्वको अवधारणा स्थापित हुने थियो । तर, प्रजातन्त्र र सामूहिक नेतृत्वमाथि विश्वास गर्ने लोकतन्त्रवादी नेता देउवाजीले पार्टीमा त्यस प्रकारको अधिनायकवादलाई छिर्न दिएनन् । उनले एक्लै हारको जिम्मेवारी लिँदै लिएनन् । प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा त यस्तो पो हुनुपर्छ । बरू उनले पार्टी हार्नुका कारण पत्ता लगाएर केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मतिले ती कारणहरू पारित गराए । पारित हारका कारणहरू विश्लेषण गर्दा छर्लंग हुन्छ । यसमा सभापति मात्र होइन, कांग्रेस पार्टीकै पनि दोष छैन । दोष मधेसी र वाम गठबन्धनहरूको छ ।
हारको पहिलो कारण गठबन्धनलाई मानिएको छ । प्रदेश–२ मा मधेसवादी पार्टीहरूको र बाँकी सबैतिर वामपन्थीहरूको गठबन्धन । सभापतिले भनेजस्तै उनीहरूको गठबन्धन नभएको भए कांग्रेसले हार्ने थिएन । यसमा सभापतिको कुनै दोष प्रमाणित हुँदैन ।
हारको दोस्रो मुख्य कारण भारतीय नाकाबन्दीलाई कांग्रेसले ‘नाकाबन्दी’ नमान्नुलाई पनि ठहर गरिएछ । नाकाबन्दीलाई वामपन्थीहरूले ‘नाकाबन्दी’ भनेर विरोध गरिसकेपछि नियमानुसार कांग्रेसले नाकाबन्दी होइन भन्नैपथ्र्यो । वामपन्थीहरूले नाकाबन्दी भने, जनताले पत्याए । र, भोट दिए । वामपन्थीहरूले पनि नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ नभनेर कांग्रेसले जस्तै सहेर बसिदिएका भए कांग्रेसको भोट अन्त जाने नै थिएन नि ! यसमा सभापतिको के दोष ?
कांग्रेस हार्नुका अरू कारण पनि सभापतिका कारणले नभई वामपन्थीहरूकै कारणले भएका देखिन्छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयन प्रक्रियामा पर्याप्त गृहकार्य हुन नसक्नु पनि एक कारण ठहर गरिएको रहेछ । वामपन्थीहरूले राम्रो गृहकार्य गरेकाले कांग्रेसको गृहकार्य नपुगेको देखिएको मात्रै हो, यसमा सभापतिको कुनै दोष छैन । निर्वाचनका बेला कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरूमा निस्क्रियता, असहयोग, अन्तर्घात भएकाले पनि हार भएको ठहर रहेछ । यो पनि वामपन्थीहरूमा भन्दा कांग्रेसमा अलि बढी भएको मात्रै हो । वामपन्थीहरूले कम अन्तर्घात गरेर बढी भोट ल्याएकामा कांग्रेस सभापतिको कमजोरी कसरी प्रमाणित हुन्छ ? अन्तमा सामाजिक सन्जालको पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्नुलाई पनि हारको कारण मानिएको रहेछ । सामाजिक सन्जाल छुँदै नछुने सभापति यसमा दोषी हुने सम्भावनै भएन ।
यसरी जताबाट हेर्दा पनि कांग्रेस हार्नुमा सभापतिको होइन, वामपन्थीहरूकै दोष प्रमाणित हुन्छ । सबै दोष वामपन्थीहरूको हुँदाहुँदै पनि सभापतिज्यूले बैठकमा कांग्रेसको हारको जिम्मेवार केपी ओली र प्रचण्डलाई ठहर गर्ने निर्णय भने गरेनन् । त्यसैगरी आफूले एक्लै हारको जिम्मा लिएर पार्टीमा एकल नेतृत्वको अधिनायकवाद पनि स्वीकारेनन् । बरू, आफ्नै पार्टीको सिंगो केन्द्रीय समितिलाई दोषको जिम्मेवारी बोकाएर प्रजातन्त्रप्रतिको जुन निष्ठा प्रदर्शन गरेका छन्, त्यो अद्वितीय छ । रामचन्द्रजी र सिटौलाजीहरूलाई चेतना भया !